थाहा पाई राखौ राती निर्बस्त्र सुत्नुका फाइदा कती ? onlinedarpan.com
Wednesday 20th of October 2021 / 01:02:20 AM
थाहा पाई राखौ राती निर्बस्त्र सुत्नुका फाइदा कती ?
अनलाइन दर्पण 2017-04-23
सुत्ने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । कोही कपडा लगाएर सुत्छन् भने कोही कपडा नलगाई ।
एक अनुमानअनुसार १० प्रतिशत मानिसहरु नाङगै सुत्छन् । तिनीहरुले वास्तवमै सही गरेका हुन्, किनभने विना कपडा सुत्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि छ ।
के–के छन् त फाइदा ? पढ्नुहोस् :